Cali Khaliif oo maanta ka degay magaalada Laascaanood – STAR FM SOMALIA
Cali Khaliif oo maanta ka degay magaalada Laascaanood
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyrdh ayaa maanta ka degay magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool, kaddib markii diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dalka Jabuuti oo uu maalmahan u joogay wada hadalada uu la lahaa Somaliland.
Sida ay sheegayaan wararka Cali Khaliif loo diiday in diyaarada siday ay soo caga dhigato garoonka diyaaradaha Buuhoodle, kaddibna uu goostay inuu ka dego magaalada Laascaanood.
Wararka ayaa sheegaya in Cali Khaliif markii uu ka degay garoonka diyaaradaha Laascaanood uu u gudbay degmada Widhwidh oo u dhow degmada Buuhoodle.
Dr. Cali Khaliif ayaa 6-dii bishan ka dhoofay magaalada Hargeysa, kaddib markii loo diiday inuu ka dhoofo magaalada Buuhoodle, iyadoo is hor-taag ku sameeyeen maleeshiyooyin hubeysan.
Siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa la dhacsaneyn tallaabada Cali Khaliif Galeyrdh ee wada hadalada Somaliland, iyagoo ku eedeeyay inuu heshiis la galay Madaxweyne Siilaanyo.
Deegaanada Sool iyo Sanaag ayaa lahaanshihiisa waxaa isku heysta Maamulada Puntland iyo Somaliland oo horay dagaalo ugu dhex maray, iyadoo Maamulka Khaatumo oo afar sano ka hor looga dhawaaqay deegaanadaas uu sheegtay inuu labada maamul ka madax banaan yahay.
Madaxweyne Farmaajo oo xilka si rasmi ah ula wareegay (Daawo Sawirada).